U Tha Yin Medicine Hall | ဦးသာရင် ဆေးတိုက် (Myanmar)
U Tha Yin Traditional Medicine for Body Homeostasis
U Tha Yin Medicated Powder
U Tha Yin Medicated Oil
Lwin Myint Aung Penny Wort Syrup
Lwin Myint Aung Penny Wort Tea
More than 70 years of proven Efficacy +
WHO GMP compliance Quality & Safety.
ISO - 9001 Certified, GMP Certified medicine
U Tha Yin
Lwin Myint Aung Penny
Penny Wort Tea
U Tha Yin Medicine Hall Manufacturing plant is located in Kyansitthar Industrial Zone 2, South Dagon Township, Yangon, Myanmar. It is designed and built to comply with the strict requirements of WHO (World Health Organization) GMP (Good Manufacturing Practice) guideline & ISO (Inter national Organization for Standardization) standards. Our Manufacturing plant is GMP certified by Ministry of Health and Sports, Myanmar and GMP & ISO 9001 certified by SGS (Thailand).
လေဖြတ်ခြင်းဟာ ဆီးချို၊ သွေးချိုရောဂါအခံရှိသူတွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါရောဂါရှင်တွေအဖို့ဦးနှောက်သွေးကြောကျဉ်းတဲ့နေရာမှာ သွေးခဲဖြစ်လာတဲ့အခါ သွေးကြောပိတ်ပြီး လေဖြတ်သွားနိုင်သလို သွေးကြောပိတ်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ သွေးကြောပေါက်သွားရင်လည်း လေဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံး New Normal Lifestyle နဲ့ အသားကျအောင် နေထိုင်ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ နေထိုင်မှုပုံစံအသစ်နဲ့ ပြောင်းလဲဖြတ်သန်းရတဲ့ကာလအတွင်း မဖြစ်မနေ အပြင်ထွက်ရတဲ့အခါ မိမိကျန်းမာရေးအတွက် Safe ဖြစ်အောင် ဘာတွေ လိုက်နာလုပ်ဆောင်ဖို့လိုလဲဆိုတာ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ဖွားဖွားအကြိုက် လွင်မြင့်အောင်မြင်းခွာရွက် လက်ဖက်ခြောက်
အိမ်မှာနေရင်း တစ်နေ့တစ်နေ့ ကိုယ်တွေသာ အစားအသောက် ချေးများနေတာ၊ ဖွားဖွားကတော့ ရေနွေးကြမ်းလေးသောက်ရင်း ဇိမ်ကိုကျနေရောပဲ။ ခုတလော ဘာလို့ ရေနွေးကြမ်းပဲ သောက်နေလဲမေးကြည့်တော့ လွင်မြင့်အောင်မြင်းခွာရွက်လက်ဖက်ခြောက်မို့ သောက်တာပါ တဲ့။
© 2020-2022 U Tha Yin Medicine Hall. All rights reserved. Web Design by NetScriper
No.(65), Corner of Mahar Bandula Road & Myawaddy Mingyi Road, Kyansitthar Industrial Zone II, South Dagon Township, Yangon.
No. 130/6, Ngahtetgyi Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar.